Weli xoqidda madaxa aad ku files ka PC gudbaayo phone Android? Waa sahlan tahay haatan. Halkan waa tababare Android - Wondershare MobileGo for Android . Sidaa daraadeed, si aad u qalabka Android wareejin karaan faylasha, kuwaas oo music, videos, sawiro, SMS iyo barnaamijyadooda, ka PC. Haddii audio iyo video waxay leeyihiin qaabab karin, sida FLV, wmv iyo AVI, tababaraha this Android kaa caawin doona inaad iyaga loogu badalo in ay MP3 iyo MP4. In this article, waxaana idin ​​tusin doonaa sida loo sameeyo tallaabada kala iibsiga faylka talaabo.
Download Tababaraha this Android si ay u gudbiyaan files si Nexus ka PC.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka PC in Android
Hadda, aan bilowno Tababaraha this Android aad kombuutarka dib markii la rakibey.
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android inay PC
Iyadoo version daaqadaha barnaamijkan, in aad kombuutarka labada via cable USB ama Wi-Fi ku xidhi kartaa telefoonka aad Android. Phone Your Android in isla markiiba la ogaado doonaa oo wuxuu muujin doonaa ilaa uu furmo suuqa ugu weyn. Fadlan ha xusuusan si ay awood hab Debuggig USB telefoonka aad Android hor xiriir.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android taageertaa telefoonada badan Android iyo miisaska, oo ay ku jiraan HTC, Samsung iyo LG. Halkan, waxaad eegi kartaa dhammaan qalabka Android taageeray .
Tallaabada 2. Transfer files ka PC in Android
Sida aan kor ku xuso, in aad qalabka Android wareejin karaan music, videos, xiriirada, sawiro, SMS iyo barnaamijyadooda ka computer.
Tiirka bidix, guji "Music" iyo "Videos". On suuqa kala saxda ah, guji "Add". Markaas, caleenta your computer ilaa aad ka heshid si aad doonayso music ama videos. Haddii Tababaraha Android lagu ogaadaa in music iyo videos leeyihiin qaabab leheyn, waxaa idin xusuusin doonaa oo kaa caawinaya in aad iyaga loogu badalo in ay Android qaabab saaxiibtinimo.
Guji "Sawirro" khaanadda tagay. Guji "Add". Daaqadda file browser, heli sawirada aad jeclaan lahaa inaan soo dhoofsadaan. Oo waxaad iyaga ku soo dhoofsadaan.
Guji "Apps" si ay u muujiyaan oo dhan barnaamijyadooda telefoonka aad Android. By gujinaya "rakib", waxaad ka heli suuqa kala file browser. Browse your computer-ada iyo heli ah. Markaasaan iyagii u dajiyo.
Fiiro gaar ah: Tababaraha Tani Android sidoo kale ku siinayaa awood ay ku SMS iyo xiriirada wareejiyo ka PC qalabka Android, iyo wareejiyo faylasha sida sms ka Android inay PC .
Daawo tutorial video si ay u gudbiyaan files ka PC qalabka Android ah.
Download Tababaraha this Android si ay u gudbiyaan files ka PC qalabka Android ..
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka PC in Android